ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၉-၇-၂၀၁၃ - နံနက်ပိုင်း)
မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၉-၇-၂၀၁၃ - နံနက်ပိုင်း)
- အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေရဲ့ မိန့်ခွန်းကို နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာကနေ ထုတ်လွှင့်ပေးဖို့ တောင်းဆို click
- အာဇာနည်နေ့ ဥသြဆွဲ ဂုဏ်ပြုရေး (ရုပ်သံ) click
- မိမိအရေးထက် တိုင်းပြည်အရေးကို ဦးတည်ဖို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြော click
- လက်ပံတောင်းတောင် ဒေသခံ ၃ဝဝ ကျော် ဆန္ဒပြ click
- လက်ပံတောင်းစီမံကိန်း ဒေသခံ သဘောထား click
- NBF တိုင်းရင်းသာ ၁၅ ပါတီ ဆွေးနွေးပွဲ click
- ဗုဒ္ဓဂါယာ တိုက်ခိုက်မှု ဒဏ်ရာရသူတွေထဲ မြန်မာသံဃာတပါး ပါဝင် click
- ဗုဒ္ဓဂယာကို ငြိမ်းချမ်းရေးနယ်မြေအဖြစ် အစွမ်းကုန် ထိန်းသိမ်းမယ်လို့ အိန္ဒိယ ကတိပြု click
- တိုက်ခိုက်မှုတွေ ထပ်မဖြစ်စေဖို့ နိုင်ငံတကာ သံဃာတွေ တောင်းဆို click
- သွေးချင်းတို့ရဲ့အသံနဲ့ မျိုးစောင့်ဥပဒေ (အသံ) click
- ပဋိပက္ခတွေကြောင့် လုပ်ငန်းတွေ နှောင့်နှေးရကြောင်း ICRC ပြောဆို click
- မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အထောက်အကူ တိုးပေးဖို့ ICRC တောင်းဆို click
- ကလေးစစ်သား ပြန်လွှတ်မှု ကုလ ကြိုဆို click
- ကလေးစစ်သား လွှတ်ပေးမှု UNICEF ကြိုဆို click
- သီလဝါ စီးပွားရေးဇုန်အတွင်းက လယ်သမားတွေနဲ့ အာဏာပိုင်များ တွေ့ဆုံညှိနှိုင်း click
- လယ်မြေသိမ်းဆည်းမှု ဖြေရှင်းရေး အားနည်းနေဆဲ click
- တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေး အကြံပြုချက် လွှတ်တော်ကို တင်ပြသွားမည် click
- ပုံနှိပ်ဥပဒေမူကြမ်းနဲ့ စာနယ်ဇင်းကောင်စီ (ရုပ်သံ) click
- ဇူလိုင် ၇ ရက် (သို့မဟုတ်) မြန်မာ့သမိုင်း၌ မေ့ပျောက်၍မရသော နေ့တနေ့ (ဆောင်းပါး) click
- ၅၁ နှစ်မြောက်7July အရေးတော်ပုံ ၁ (ရုပ်သံ) click
- ၅၁ နှစ်မြောက်7July အရေးတော်ပုံ ၂ (ရုပ်သံ) click
- စာပေဆိုင်ရာ နိုဘယ်ဆုရှင်များ - အပိုင်း (၃) click
- ဘိန်းဘုရင် လော်စစ်ဟန် ကွယ်လွန် click
- ရန်ကုန်မှာ လျှပ်စစ်စက်ရုံ ၃ ခု တည်ဆောက်မယ် click
- လန်ဒန် စီးကရက် ပြန်လာတော့မည် click
- မြန်မာပြည် အကြွေးကတ် သုံးစွဲရေး အလားအလာ (ရုပ်သံ) click
- ပန်းတနော်၊ ကျုံတိုင်းကြီးဝ မူလတန်းကျောင်း (ရုပ်သံ) click
- မှတ်တမ်းတင် မျက်ရည်ပင်လယ် ရုပ်ရှင်ကား (ကဗျာ) click
- ခြံခတ်ကြည့်ခြင်း (ကာတွန်း) click
- အီဂျစ်ဆန္ဒပြမှုအတွင်း လူ ၄၀ ကျော် သေဆုံး click
- အီဂျစ် ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှု လူ ၄၂ ဦး သေဆုံး click
- အီဂျစ်ရွေးကောက်ပွဲ ရှေ့နှစ်ဆန်း ကျင်းပမည် click
- အီဂျစ် အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဖို့ ကြေညာ click
- အမေရိကန်-တရုတ် Cyber အငြင်းပွားမှု စတင်ဆွေးနွေး click
- လေယာဉ်ဆင်းသက်မှု အမောင်းသင်စဉ် Asiana ပျက်ကျ click
- တရုတ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသား မုဒိမ်းမှုနဲ့ စွဲဆို click
- ဗုဒ္ဓဂါယာ တိုက်ခိုက်မှု မသင်္ကာသူ ၁ ဦး ဖမ်းမိ click
- ဗုဒ္ဓဂါယာ ဗုံးပေါက်ကွဲမှု တရားခံတဦးကို ဖမ်းမိ click
- ဗုဒ္ဓဂါယာ ဗုံးကွဲမှု လူတဦးကို ဖမ်းဆီး click
- အိန္ဒိယ ရိက္ခာထောက်ပံ့ရေး အစီအစဉ်သစ် (ရုပ်သံ) click
- ဘာသာစကား ထိန်းသိမ်းရေးနဲ့ ကျေးလက်ပွဲတော် (ရုပ်သံ) click
- အန္တာတိတ်ရေခဲပြင်အောက် ရေအိုင်မှာ ရှေးဟောင်း ငါးမျိုးတွေ ရှိနိုင် click
- google glass ဆိုတဲ့ ကွန်ပျူတာမျက်မှန်အကြောင်း - cool_tech (အသံ) click
INTERNET CONNECTION များနှေးနေတာကြာပြီ ။
ထုံးစံအတိုင်း တမင် CONTROL လုပ်ထားတာဘဲဖြစ်မယ် ။
ဒေါ်လာဈေးတွေ တက်လို.အခြေခံစားကုန်နဲ.လူသုံးကုန်ဈေးနှုန်း များလည်း
၀န်ထမ်းတွေနဲ. အခြေခံလူတန်းစားတွေ မကြာမီ ဒုက္ခ
လွှတ်တော်အမတ်မင်းများ ကို တစ်လ ၅သိန်း လစာ
ပေးထားတော. (ဘာညာဘာညာနဲ.ပေါင်းရင်) အဆင်ပြေကြမှာပါ ။
မင်းပြောတာပာုတ်တယ် ကိုယ့်လူ နိုင်ငံတော်အဆီအနှစ်ရှိနေသမျှ ကာလပတ်လုံးလက်ပန်းကျမှာမပာုတ်ကြဘူး တရုတ် အမေရိကန်တွေ အိမ်နီးချင်းတွေက ၀မ်းသာအားရစွာနဲ့လတလောမှာမိသလောက်အမြတ်ထုတ်ဖို့ကြိုး
စားနေကြတာ ဘယ်သူတွေအတွက်လည်း ငါတော့မထင်ဘူးမိတ်ဆွေရေ့ တချို့အဖွဲ့တွေကလဲ အဲဒီအခွင့်အရေးတွေရမလားဆိုပြီးထင်ကြေးတွေနဲ့ သဘောတွေတူ လက်မှတ်တွေထိုး ငါတော့မထင်ဘူးမိတ်ဆွေရေ့ ၀ါသနာကိုကခေါတ်နောက်ပြန်ဆွဲချင်ကြတာဘဲ ရသမျှကိုနောက်ဆုံးဝါးလုံးချီးသုတ်ဦးမှာ
ခောတ်ကာလပြောင်းပြီ ၊ရန်ကုန်မှာ အင်းစိန်လမ်းမကြီး
တလျောက်လမ်းဘေးအမှိုက်ပုံ ခိုင်းပြီး ကားနဲ.သယ်တဲ.
စနစ်ကို ပြောင်းလဲသင်.ပါပြီ ။
ညဘက် TOURIST များ လည်ပတ်သွားလာရာမှာ အမြင်မတော်သလို အမှိုက်ပုံနေရာသတ်မှတ်တဲ.နေရာက
ပြည်သူများမှာလည်း ရာသက်ပန် ဒုက္ခရောက်ကြရပါတယ်။